के लामखुट्टेबाट पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण हुन्छ ?
लामखुट्टे र कोरोनाभाइरस अर्थात् सार्स कोभ २ को सम्बन्ध के होला ? यस विषयमा अहिले पनि विश्वमा विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन् । यहीबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले लामखुट्टेको टोकाइबाट कोरोनाभाइरस नसर्ने बताएको छ ।
साइन्टिफिक जर्नलमा छापिएको एक रिसर्चअनुसार कोरोनाभाइरस संक्रमितलाई टोकेको लामखुट्टेले नै स्वास्थ्य मानिसलाई टोक्दा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण नहुने देखिएको छ ।
यो रिर्सचका लेखकले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको समयमा पनि कोरोनाभाइर संक्रमितलाई टोकेको लामखुट्टेले अरु कसैलाई टोक्दा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिँदैन । यो कुरालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।’
तर, अहिलेसम्म कोरोनाभाइरस र अन्य जनावरको सम्बन्धबारे चाहिँ पुष्टि भइसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति : साउन ३, २०७७ शनिबार १८:३७:५०,